FOKONTANY ANTANIMALANDY : Nahazo “poste avancé” ny Polisim-pirenena
Nitady toko ka sendra vato ho amin’ny fampandriana fahalemana ho an’iny faritra ilan’Antsinanan’i Mahajanga iny dia ny Fokontanin’Antanimalandy izany. 17 mai 2017
Ny alakamisy 18 mey ho avy izao no hatolotra ny filoham-pokontany any an-toerana ny fanalahidy ho an’ity toby vaovao ho an’ny Polisim- pirenena hisahana ny fandriampahalemana any amin’iny faritra iny.
Narisarisa tokoa izany fandriam-pahalemana izany teo aloha, ka nosokajiana ho faritra mena ho fieren’ny jiolahy avy manao ny asa fanafihana aty ambonivohitra nandritra ny taona maro. Ainga vao ho an’ity sefo fokontany, dia i Tonga Fiarena izay niady mafy tamin’ireo solontenam-panjakana misy eto an-toerana no nahazoana ity fotodrafitrasa izay miorina eny Amparihingidro terminus taksibe zotra faha-13 iny. Efitrano roa miampy toeram-pialofana iray handraisan’olona no horaisina amin’ny fomba ofisialy tsy ho ela ho an’ity tobin’ny Polisy, hanao ny savahao sy handrindra ny filaminana ao amin’ity Fokontanin’Antanimalandy ity.
Tafajoro ihany koa ny vovonan’ireo sojabe hanao fanelanelanana amin’ny resaka ady tany izay efa mateti-pitranga ao amin’ity fokontany ity, ka 120 no isan’ireo sojabe mandrafitra izany. Ireto farany no hiantsoroka ny fandaminana ifotony mialoha ny hitondrana ny raharaha eny anivon’ny Fitsarana raha toa ka mitranga ity ady tany ity. Natao ireo rehetra ireo hoy hatrany i Tonga Fiarena, filoham-pokontany mba hisian’ny fandaminana sy marimaritra iraisana hijerena ny lafiny maha-olona sy hitsinjovana ny fiarahamonina ho an’ireo andaniny roa tonta mifanolona amin’izay resaka ady tany izany.
Santionany amin’ireo fampandrosoana ifotony ao amin’ny Fokontanin’Antanimalandy ireo vitan’ny Sefo Fokontany ireo sy ny lefiny dia Ravalimanjato Solohery nandritra ny fito volana nahavoafidy azy ireo eo aminy toeran’ny Sefo Fokontany izay. Marihina fa midadasika ao anaty velaran-tany 474 hekitara, ahitana mponina 14 000, tsinjarain’ireo vakim-paritra fito mandrafitra ny Fokontany ity fokontanin’Antanimalandy ity, izay manamorona ny lalam-pirenena faha-4 iny, nialoha ny hidirana ny tampon-tanàn’i Mahajanga.